वयस्क खेल - खेल सेक्स Games & अश्लील मुक्त लागि खेल
वयस्क खेल विरुद्ध coronavirus: सही छनौट
धेरै छन्, वयस्क खेल यी दिन. तर, एक खेल निर्माता छ फेला एक आदर्श र पनि एक अद्वितीय तरिका बढाउन आफ्नो खेल को लागि निःशुल्क छ र, एकै समयमा, अपिल को खतरा फैलाउने coronavirus संक्रमण । भिडियो खेल निर्माता Kagami काम गर्ने निर्णय गरेको छ वितरण 90,000 मुक्त प्रतिलिपिहरू को वयस्क खेल संग, सबै भन्दा राम्रो भनिन्छ एक दर्पण चिनियाँ राख्न, आफ्नो घर मा मान्छे र यसरी कम संक्रमण फैलिन. सबै नागरिक त्यहाँ के गर्न आवश्यक छ प्राप्त गर्न यो खेल डायल गर्न फोन नम्बर, हाइलाइट को भाग रूपमा पदोन्नति को यो कम्पनी भनिन्छ "वुहान, हामी तपाईं संग हो!".
खेल प्रदान गर्दछ, एक ठूलो चयन को बालिका गर्ने राख्नुहोस् "कम्पनी" खेलाडी संग जबकि लुकाइरहेका देखि यो भाइरस मा घर छ । पदोन्नति को यो कम्पनी साबित गर्न एक राम्रो व्यापार कदम, as evidenced by the fact that Kagami पछि, केवल एक दिन को वितरण को वयस्क खेल थियो, प्रदान गर्न एक अतिरिक्त 20,000 मुक्त डाउनलोड. दर्पण जोड scantily clad बालिका भनेर खेलाडी आवश्यकता पराजित गर्न विभिन्न पहेली तिनीहरूलाई लिन बन्द । खेल वितरित छ लागि 0.,79 डलर, त्यसैले Kagami गुमाउन छैन, धेरै पैसा दिएर यो दूर, र मुक्त प्रचार छ फर्के गर्न तिनीहरूलाई धेरै पटक भन्दा ।
हुनत केही निन्दा गरेका छन् कम्पनी को लागि प्रयोग कि एक भाइरस संक्रमित र हत्या को धेरै मान्छे मा चीन, धेरै सहमत भनेर सार्न प्रोत्साहन सुरक्षित व्यवहार । खेल जान्छ खेलाडी सुरक्षित रहन आफ्नो घर छ, र यो पनि underscores महत्त्व को लुगा धुने आफ्नो हात रूपमा अक्सर रूपमा सम्भव छ, जो पक्कै पनि राम्रो सल्लाह - कि एक महामारी चलिरहेको छ वा छैन ।
निन्टेन्डो हेर्न प्रेम थियो वयस्क खेल लागि एक अधिक परिपक्व दर्शक मा यसको स्विच कन्सोल
तापनि निन्टेन्डो लिया छ मा भूमिका को प्रकाशक को परिवार खेल, कम्पनी बढ देखिन्छ दूर देखि बजार रणनीति र तयारी मा पौडी खेल्न अलि बढी परिपक्व पानी । निन्टेन्डो देखिन्छ इरादा गर्न दूर सार्न यसको परम्परागत रूपमा भूमिका एक प्रकाशक को परिवार खेल । अन्य शब्दहरू, मा एक लेख अनुसार वाल स्ट्रीट जर्नल मा, यो जापानी कम्पनी reportedly प्रोत्साहन गर्न विकासकर्ताहरूको ल्याउन वयस्क खेल लागि अधिक परिपक्व दर्शकहरु आफ्नो स्विच console.
साथै hellish रक्तपात मा कयामत र युद्ध मा Wolfenstein 2, हामी आशा गर्न सक्छौं अन्य तर पनि अलि फरक वयस्क खेल मा पहिलो संकर console. अर्थात्, Shinobi Refle: Senran Kagura, जो मा एक खेल तपाईं मालिश sexy girls, र रात को ट्याबनेतृत्व 2: दुलहीको नयाँ चन्द्रमा, एउटा कार्य आरपीजी संग scantily clad महिला वर्ण, आउँदै छ स्विच गर्न., उन को शीर्ष मा, पहिले, यो पुष्टि भएको थियो कि हामी हुनेछ शूटिंग horny बालिका मा गला बन्दूक2संग एक फेरोमोन मा स्विच रूपमा, जो राम्रो छक्क खेल विकासकर्ताहरूको आफूलाई किनभने तिनीहरूले आशा थिएन यस्तो शीर्षक कहिल्यै आउन जीवन मा निन्टेन्डो गरेको console.
निन्टेन्डो छ urging केही हिंसात्मक वा जोखिमपूर्ण भिडियो खेल प्रकाशक प्रदान गर्न अलि फरक सामग्री लागि आफ्नो स्विच गर्न कन्सोल tarnish परिवार-मात्र उपकरण निर्माताहरु' image. केही विकासकर्ताहरूको भनेर दाबी निन्टेन्डो छ "निष्क्रिय भएको यति सम्म" जब यो आउँछ हिंसात्मक र जोखिमपूर्ण शीर्षक । तर, एउटै हुन सक्दैन भने को लागि आफ्नो वर्तमान रुख । अर्कोतर्फ, निन्टेन्डो यसो भनेर यो छ रूपमा "संग पुस्तकहरू, टेलिभिजन, र चलचित्र; विभिन्न सामग्री इरादा छ लागि विभिन्न दर्शकहरु "., यो छ भन्न कुनै अतिशयोक्ति को विस्तार को संग्रह वयस्क खेल मा स्विच एक मुश्किल बाटो निन्टेन्डो लड्न चाहन्छ प्रतियोगिता प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय बिक्री को प्लेस्टेशन4र Xbox एक एक्स console.
अश्लील संस्करण को अन्तिम काल्पनिक XV लायक छैन प्रतीक्षा 10 वर्ष को लागि
चाँडै रिलीज पछि को अन्तिम काल्पनिक XV, जो हामी प्रतीक्षा गरिएको थियो दस वर्ष को लागि, एक porn parody बाहिर आए भन्ने थियो hurried र लगभग रूपमा राम्रो, यति भनेर हामी भए पनि एक सानो आहत. अन्तिम कल्पना XV थियो कि एक खेल थियो काम मा दस वर्ष को लागि, र माध्यम गए सबै कुरा गर्न बल्ल व्यवस्थापन गर्न आनन्द, यसको वफादार दर्शक । पूर्ण-सेवा स्टेशन एक अश्लील parody of the Brazzers कम्पनी, uncharacteristically hurried र एक पूर्ण असफल प्रयास बीचमा वयस्क खेल । , तपाईं बताउन छौँ कमी को लिंक र भिडियो यो समाचार मा स्पष्ट कारण, तर हामीलाई विश्वास छ - यो गरेको छैन भनेर तपाईं बाहिर हराइरहेको हुनुहुन्छ पनि धेरै ।
पनि शीर्षक नै छैन, गर्न पनि नजिक, को मूल छ हुनत, हामी स्वीकार हुनेछ कि आफ्नो लोगो एकदम राम्रो छ । तर पछि लोगो, सबै गलत भयो । मुख्य चरित्र छ गंजा शन कुकर्मीहरू हुनत, अन्तिम कल्पना XV कुनै गंजा वर्ण, र मुख्य महिला भूमिका छ Nikki Benz, जो गर्न अनुमानित छ प्रतिनिधित्व Cindy. अझै पनि, Cindy छ छोटो गोरा बाल, र Nikki लामो खैरो र स्पष्ट कुनै विचार छ कार बारेमा.
फिल्म गरेको विवरण एक बिट हास्यास्पद, तर यो स्पष्ट बनाउन पर्याप्त हामीलाई संकोच बारेमा उद्धृत, र कि हामीलाई बताउँछ यो राम्रो छैन स्पर्श गर्न यो । हामी व्याख्या षड्यन्त्र, यद्यपि, र फिलिम गरेको परिसर Nikki फिक्स शन गरेको कार मा मरुभूमि when they are attacked byaट्रोल कि Nikki हत्या, जो पछि उहाँले discovers यो मात्र छैन राक्षस he ' s going to deal with. यो स्पष्ट छ. तपाईं के भइरहेको छ insinuated यहाँ । एक प्रशंसक रूपमा वयस्क खेल, छन् रूपमा तपाईं निराश रूपमा हामी?
हामी प्रयास Haydee - एक खेल वयस्क लागि र विरामीहरु (18+)
Haydee रूपमा एक indie शीर्षक संग एक बिट पुरानो जमानाको gameplay संयन्त्र एकदम आश्चर्यजनक shreds बीचमा वयस्क खेल, तर यो छैन बस किनभने को protagonist गरेको ओभरसाइजगरिएको छाती. सबै पछि, यो खेल साँच्चै एक धेरै सामग्री छ । धेरै जस्तै अन्य वयस्क खेल, यो हुन सक्छ गर्न रोचक केही अलि पुराना gamers को बीचमा छ जो तपाईं को लागि धैर्य झन् कठिन र भ्रामक पजल्स र कार्य क्षण पछ्याउन कि पछि "कोठा". खैर, यो खेल छ बारे 160 "कोठा", भन्न विकासकर्ताहरूको.